Proverb Amalon' Imoriandro aho, ka tsy hain--jaza tsy haim--behivavy. [Houlder 1895 #1661]
Proverb Andevolahy mampirafy: intelo mihosina ampombo. [Cousins 1871 #182]
Proverb Andevolahy mampirafy, ka manita-draharaha. [Veyrières 1913 #515]
Proverb Aza lozabe manana anaka, andrao tsy manan--dray ny zaza. [Houlder 1895 #1834]
Proverb Aza miadaladala toy ny ankizy voky jabora. [Rinara 1974 #719]
Proverb Aza mikapa sakaiza hoatry ny andevolahy homan-tain-jiro. [Veyrières 1913 #546]
Proverb Lambo mandom-boara : miraingiraingy amin' ny ho hanin' ny ankizy. [Rinara 1974 #1720]
Proverb Lokan' ankizy, ka izay azo dia hanina. [Veyrières 1913 #2381]
Proverb Nahoana no saro-po manan' anaka : sao tsy manandray ny ankizy ? [Rinara 1974]
Proverb Ny saina toy ny hady : marivo loatra itsambikinan' ny ankizy, lalin-doatra mamandrika ny tena. [Rinara 1974 #3235]
Proverb Valabalaka hoatry ny andevolahy homan-goaika. [Veyrières 1913 #602]
Proverb Voangory voafatotr' ankizy : manidina ihany fa eny ho eny. [Veyrières 1913 #1545, Rinara 1974 #4989, Cousins 1871]